August 2012 ~ IT Guide Myanmar
Cracklock 3.9.44 အချိန်ရပ် ပရိုဂရမ် နှင့် အသုံးပြုနည်း
ညီလေးတစ်ယောက်က ကျနော့ကိုမေးဘူးပါတယ် အစ်ကိုတဲ့ ကျနော် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုတွေ့လို့ သူက free download ဆိုပြီးရေးထားတော့ ကြိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းပြီး
install လုပ်လိုက်တာ လုပ်ပြီးမှ 15 ရက်ပဲအစမ်းသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ Trial Version ဖြစ်မှန်းသိတော့တယ်
အဲဒီပြဿနာကို ရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိရင် ပြောပြပေးပါဆိုလို့
ပရိုဂရမ်တွေကို full version ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက
အလွယ်ဆုံးလို့တောင်ဆိုရမယ့် နည်းလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီပရိုဂရမ်လေး ကို ကျနော်ရထားတာကြာပါပြီ အားလုံးအတွက်လည်း အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအသုံးဝင်
1.Add Program ကိုနှိပ်ပါ
2. မိမိ အချိန်၇ပ်လိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ရှိတဲ့ folder ထဲမှာရှိတဲ့ .exe တွေအားလုံးကို အချိန်နောက်ပြန်ရေတွက်ခြင်း
ပြီးရင်တော့ ok ပေါ့ ။ အကယ်၍မရခဲ့လျှင် freeze date and time ကိုအမှန်ခြစ် ပေးပါ
လိုချင်သူများအောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ် Version အဟောင်းကလေးပါ Partable ဖြစ်လို့ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး ဒေါင်းပြီး rar ဖိုင်ကို extract လုပ်ပြီးရင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ
အောက်က link နှစ်ခုက exe ဖိုင်တွေဖြစ်လို့ install လုပ်ဘို့လိုပါတယ်
သင့် computer ကို အန္တရာယ်ပေးမယ့် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ့်Process Hacker
Hacker ဆိုလို့ လန့်မသွားပါနဲ့။ ဒီ Hacker က သင့် Computer လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၀န်ဆောင်းမှုပေး မယ့် Process Hacker ပါ။ သင့် computer လုပ်ငန်းစဉ်များကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ် များ ကို စီမံ
ပေးနိုင်ပါတယ်။ Process Hacker သည် Open Source Application ဖြစ်ပြီး Task Manager ရဲ့ အသွင်အပြင် များကို သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သင့် computer ကို အန္တရာယ်ပေးမယ့်
ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အရာတွေ ကို စောင့်ကြည့်ပေးမှာပါ။
Computer ကို ဖွင့်ပြီး စသုံးလိုက်တာနဲ့စနစ်နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ application တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့သိထားသင့်ပါတယ်။ Windows Task Manager နဲ့ စစ်ကြည့်နိုင်ပေမယ့်
အသေးစိတ်တော့မသိနိုင်ပါ။ ဒီ အားနည်းချက်ကို Process Hacker က အားဖြည့်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Process Hacker က ဖျောက်ထားတဲ့ ၊ ဖွက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း စဉ်များကိုပါ သိတာတယ်။ တစ်ချို့က ဒါတွေ
သိစရာမလို ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ Computer မှာ Error တွေ ခဏခဏ တက်နေတဲ့အခါ (သို့) စနစ်က အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်တဲ့အခါ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိဖို့
လိုလာ ပါပြီ။......ဆက်ကြည့်ပါစို့Process Hacker Process Hacker ကို ကျွန်တော်တို့ Computer က လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Feature-packed Tool လို့ ဆိုရအောင်။
အောက်ဖော်ပြပါပုံမှာ ကွန်ပျူတာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Process Hacker က အဆင့်ဆင့် ပြပေးထားပါတယ်။
- လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု အပြည့်အစုံစာရင်းနဲ့ ၄င်းတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အမိန့်များ ( start, stop, pause, resume and delete)
- လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးအတွက် အချက်အလက်များ၊ ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း၊ အန္တရာယ်များစာရင်း၊ virtual mempry မြေပုံ၊ အချက်အလက်ပြမြေပုံ စသည်တို့ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
- ထို့အပြင် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို အပြည့်အ၀ ထိန်းချုပ်ဖို့ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ( ဥပမာ - လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲများရဲ့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်၊ driver ဆော့ဖ်ဝဲများ ရဲ့
စွမ်းဆောင်ရည်၊ ၄င်းတို့ကို ဆိုင်းငံထားခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်စေခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဖျောက်ထားတဲ့ ၊ ဖွက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှာဖွေခြင်းနဲ့ ၄င်းတို့ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ Process Hacker သည် Hacker Defender, FU ကဲ့သို့ ဖျောက်ထားတဲ့ rootkits များကို ချိတ်ဆက်ခြင်း Terminating
IceSwordHacker Defender detection- DLL ထည့်ခြင်းနဲ့ ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ အခြားများစွာသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
1:08 AM နည်းလမ်းများ No comments
နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 14.0.1 ဖြစ်ပါတယ်
အပေါ်က ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Tools>Options အဆင့်လိုက်သွားပါ ။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း 1. Zawgyi-one နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ
2. Advanced ကိုနှိပ်ပါ အောက်ကပုံအတိုင်း font box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 1,2,3,4,5,6 ကျနော်ပြောင်းထားပေးတဲ့ အတိုင်းလိုက်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Zawgyyi နဲ့ရေးတဲ့ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် တွေကိုမြန်မာလို ကြည့်လို့ရပါပြီ။
firefox မှာ Google Translate Bar ထည့်ချင်သူများ အောက်ကပေးထားသော link ကိုသွားလိုက်ပါ
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Add to firefox ကိုနှိပ်ပါ
Restart ချခိုင်းပါလိမ့်မယ် ချပေးလိုက်ပါ
နောက်တကြိမ် ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရရင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီ